ကွန်ဒုံးအသွင်အပြင်များ – Gentleman Magazine
၁။ ချောဆီပါဝင်မှုကို ကြိုက်မကြိုက် ဆုံးဖြတ်ပါ။
အချို့သော ကွန်ဒုံးအမျိုးအစားတွေက ချောဆီသုတ်လိမ်းထားပြီးသား ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီချောဆီက သင့်ပစ္စည်းပေါ်မှာ ကွန်ဒုံးဝတ်ဆင်ရလွယ်ကူးအောင် ကူညီပေးနိုင်သလို လိင်ဆက်ဆံရာမှာလည်း ပွတ်တိုက်မှုအားနည်းစေတဲ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ပေါက်ပြဲမသွားအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ချောဆီပါပြီးသားကွန်ဒုံးတွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေက ချောဆီကို သီးခြားဝယ်ယူအသုံးပြုရတာကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကွန်ဒုံးအမျိုးအစားနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ချောဆီကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
– ရေနဲ့ ဆီလီကွန် အခြေပြုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ချောဆီတွေက ဘယ်လိုကွန်ဒုံးမျိုးနဲ့ မဆိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
– ဆီအခြေပြု ချောဆီတွေကတော့ Polyurethane နဲ့ Tactylone အမျိုးအစားကွန်ဒုံးတွေမှာသာ သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆီအခြေပြုချောဆီတွေကို Latex ရော်ဘာသားနဲ့ Lambskin သားကွန်ဒုံးတွေမှာ မသုံးသင့်ပါဘူး။
– တကယ်လို့ အကာအကွယ်ပိုကောင်းစေချင်ရင် သုက်ပိုးတွေကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်တဲ့ ချောဆီနဲ့ ကွန်ဒုံးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီချောဆီမျိုးကတော့ သုက်လွှတ်ချိန်မှာ သုက်ပိုးပမာဏများစွာကို သုတ်သင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အခန့်မသင့်လို့ ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲသွားခဲ့ရင်တောင်မှ ကိုယ်ဝန်မရစေဖို့အတွက် အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားနည်းချက်အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဓာတ်မတည့်မှု၊ ယားယံမှု၊ အရေပြားလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၂။ ဘယ်လိုမျက်နှာပြင်ပုံစံမျိုးက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ဆုံးဖြတ်ပါ။
လူတစ်ချို့ကတော့ ဘဘာဝအတိုင်းအထိအတွေ့ကို ခံစားရစေနိုင်မယ့် ကွန်ဒုံးမျိုးတွေကို သဘောကျကြပြီး တစ်ချို့တွေကတော့ အဖုအထစ်လေးတွေ ပါဝင်တဲ့ကွန်ဒုံးမျိုးက ပိုပြီးလှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်တဲ့အတွက် သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ကွန်ဒုံးမျက်နှာပြင်ပုံစံတစ်ခုစီမှာ မတူညီတဲ့ ခံစားမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် သင့်အတွက် ခံစားမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် မျက်နှာပြင်ပုံစံမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။ သင့်အဖော်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆက်ဆံမှာဆိုရင်တော့ အဖုအထစ်တွေမပါရှိတဲ့ သာမာန်အမျိုးမစားက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်အကြိုက်ကို တစ်ယောက်ကသိလာပြီဆိုမှ အခြားမျက်နှာပြင်အမျိုးအစားတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
၃။ ထိတွေ့ခံစားမှုပမာဏကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
ကွန်ဒုံးတွေမှာ Extra sensitive ဒါမှမဟုတ် ultra sensitive စသဖြင့် လေဘယ်ထိုးထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကွန်ဒုံးမျိုးတွေက တတ်နိုင်သမျှ အပါးလွှာဆုံးနဲ့ ၀တ်လိုဝတ်ထားမှန်း မသိသာအောင် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကောင်းဆုံးထိတွေ့ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အမျိုးသားတွေကတော့ လိင်ဆက်ဆံနေချိန်မှာ ကွန်ဒုံးဝတ်ထားတာကို သိနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို ပိုပြီးသဘောကျတတ်ကြတတ်သလို ပိုပြီးစိတ်ချယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ရော ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ခံစားမှုရရှိချင်တာလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
၄။ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်စေမည့် အရောင်နှင့် အနံ့ကို ရွေးချယ်ပါ။
သာမန်ကွန်ဒုံးအများစုက အကြည်ရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ၀တ်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း သင့်ပင်ကိုယ်အသားရောင်အတိုင်းပဲ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရောင်လေးတွေနဲ့ကို ပိုပြီးသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်အရောင်နဲ့မဆို ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနံ့အမျိုးမျိုးနဲ့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။
၁။ ဆေးဆိုင်များတွင် ရှာဖွေပါ။
ဆေးဆိုင်တွေမှာဆိုရင် ကွန်ဒုံးအမျိုးအစားပေါင်းစုံကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်အတွက် အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်စေမယ့် အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား၊ ပုံစံကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
၂။ အွန်လိုင်းမှ ၀ယ်ယူပါ။
တကယ်လို့ ဆူပါမားကတ်တွေ၊ ဆေးဆိုင်တွေမှာ သွားဝယ်ရမှာကို ရှက်တယ်ဆိုရင်တော့ အွန်လိုင်းအရောင်းဆိုင်တွေကနေ မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အိမ်အရောက်လာပို့ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရှက်စရာသိပ်မလိုတော့ပါဘူး။
လက်လီစိတ်ပြီး နည်းနည်းချင်းစီဝယ်ယူတာက အများကြီးတစ်ခါတည်းဝယ်တာထက် ဈေးပိုကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လက်ကားဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ အရောင်းဆိုင်ကို ရှာဖွေဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
၄။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
ကွန်ဒုံးတွေက အမြဲတမ်းအသုံးခံတဲ့အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မ၀ယ်ခင်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို အရင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
၁။ ခြောဆီပါဝငျမှုကို ကွိုကျမကွိုကျ ဆုံးဖွတျပါ။
အခြို့သော ကှနျဒုံးအမြိုးအစားတှကေ ခြောဆီသုတျလိမျးထားပွီးသား ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီခြောဆီက သငျ့ပစ်စညျးပျေါမှာ ကှနျဒုံးဝတျဆငျရလှယျကူးအောငျ ကူညီပေးနိုငျသလို လိငျဆကျဆံရာမှာလညျး ပှတျတိုကျမှုအားနညျးစတေဲ့အတှကျ သကျတောငျ့သကျသာရှိပွီး ပေါကျပွဲမသှားအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ ခြောဆီပါပွီးသားကှနျဒုံးတှကေို အလှယျတကူဝယျယူလို့လညျး ရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့လူတှကေ ခြောဆီကို သီးခွားဝယျယူအသုံးပွုရတာကို သဘောကတြတျကွပါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့ ကှနျဒုံးအမြိုးအစားနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ခြောဆီကို ရှေးခယျြတတျဖို့ လိုပါတယျ။
– ရနေဲ့ ဆီလီကှနျ အခွပွေုထုတျလုပျထားတဲ့ ခြောဆီတှကေ ဘယျလိုကှနျဒုံးမြိုးနဲ့ မဆိုအသုံးပွုလို့ရပါတယျ။
– ဆီအခွပွေု ခြောဆီတှကေတော့ Polyurethane နဲ့ Tactylone အမြိုးအစားကှနျဒုံးတှမှောသာ သုံးသငျ့ပါတယျ။ ဆီအခွပွေုခြောဆီတှကေို Latex ရျောဘာသားနဲ့ Lambskin သားကှနျဒုံးတှမှော မသုံးသငျ့ပါဘူး။
– တကယျလို့ အကာအကှယျပိုကောငျးစခေငျြရငျ သုကျပိုးတှကေို ရှငျးလငျးပေးနိုငျတဲ့ ခြောဆီနဲ့ ကှနျဒုံးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီခြောဆီမြိုးကတော့ သုကျလှတျခြိနျမှာ သုကျပိုးပမာဏမြားစှာကို သုတျသငျပေးနိုငျတဲ့အတှကျ အခနျ့မသငျ့လို့ ကှနျဒုံးပေါကျပွဲသှားခဲ့ရငျတောငျမှ ကိုယျဝနျမရစဖေို့အတှကျ အကာအကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အားနညျးခကျြအနနေဲ့ တဈခါတဈရံမှာ ဓာတျမတညျ့မှု၊ ယားယံမှု၊ အရပွေားလောငျကြှမျးမှုနဲ့ ဆီးလမျးကွောငျး ပိုးဝငျတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
၂။ ဘယျလိုမကျြနှာပွငျပုံစံမြိုးက အကောငျးဆုံးဖွဈမလဲ ဆုံးဖွတျပါ။
လူတဈခြို့ကတော့ ဘဘာဝအတိုငျးအထိအတှကေို့ ခံစားရစနေိုငျမယျ့ ကှနျဒုံးမြိုးတှကေို သဘောကကြွပွီး တဈခြို့တှကေတော့ အဖုအထဈလေးတှေ ပါဝငျတဲ့ကှနျဒုံးမြိုးက ပိုပွီးလှုံ့ဆျောမှုပေးနိုငျတဲ့အတှကျ သဘောကတြတျကွပါတယျ။ ကှနျဒုံးမကျြနှာပွငျပုံစံတဈခုစီမှာ မတူညီတဲ့ ခံစားမှုကိုပေးစှမျးနိုငျမှုတှေ ရှိနတောကွောငျ့ သငျ့အတှကျ ခံစားမှုအကောငျးဆုံးဖွဈစမေယျ့ မကျြနှာပွငျပုံစံမြိုးကို ရှေးခယျြပါ။ သငျ့အဖျောနဲ့ ပထမဆုံးအကွိမျဆကျဆံမှာဆိုရငျတော့ အဖုအထဈတှမေပါရှိတဲ့ သာမာနျအမြိုးမစားက အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ တဈယောကျအကွိုကျကို တဈယောကျကသိလာပွီဆိုမှ အခွားမကျြနှာပွငျအမြိုးအစားတှကေို စမျးသပျကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
၃။ ထိတှခေံ့စားမှုပမာဏကို ဆုံးဖွတျပါ။
ကှနျဒုံးတှမှော Extra sensitive ဒါမှမဟုတျ ultra sensitive စသဖွငျ့ လဘေယျထိုးထားတာကို တှနေို့ငျပါတယျ။ ဒီလိုကှနျဒုံးမြိုးတှကေ တတျနိုငျသမြှ အပါးလှာဆုံးနဲ့ ဝတျလိုဝတျထားမှနျး မသိသာအောငျ ဖနျတီးပွုလုပျထားပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အကောငျးဆုံးထိတှခေံ့စားမှုကို ပေးစှမျးနိုငျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့အမြိုးသားတှကေတော့ လိငျဆကျဆံနခြေိနျမှာ ကှနျဒုံးဝတျထားတာကို သိနရေတဲ့ ခံစားခကျြကို ပိုပွီးသဘောကတြတျကွတတျသလို ပိုပွီးစိတျခယြုံကွညျတတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ရော ဘယျလောကျအတိုငျးအတာအထိ ခံစားမှုရရှိခငျြတာလဲဆိုတာကို ဆုံးဖွတျထားဖို့ လိုပါတယျ။
၄။ အဆငျပွဆေုံးဖွဈစမေညျ့ အရောငျနှငျ့ အနံ့ကို ရှေးခယျြပါ။
သာမနျကှနျဒုံးအမြားစုက အကွညျရောငျဖွဈတဲ့အတှကျ ဝတျဆငျထားမယျဆိုရငျလညျး သငျ့ပငျကိုယျအသားရောငျအတိုငျးပဲ မွငျတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရောငျလေးတှနေဲ့ကို ပိုပွီးသဘောကတြယျဆိုရငျတော့ ဘယျအရောငျနဲ့မဆို ရနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အနံ့အမြိုးမြိုးနဲ့လညျး ရနိုငျပါတယျ။
၁။ ဆေးဆိုငျမြားတှငျ ရှာဖှပေါ။
ဆေးဆိုငျတှမှောဆိုရငျ ကှနျဒုံးအမြိုးအစားပေါငျးစုံကို ရရှိနိုငျပါတယျ။ သငျ့အတှကျ အဆငျအပွဆေုံးဖွဈစမေယျ့ အမြိုးအစား၊ အရှယျအစား၊ ပုံစံကို စိတျကွိုကျရှေးခယျြဝယျယူနိုငျမှာပါ။
၂။ အှနျလိုငျးမှ ဝယျယူပါ။
တကယျလို့ ဆူပါမားကတျတှေ၊ ဆေးဆိုငျတှမှော သှားဝယျရမှာကို ရှကျတယျဆိုရငျတော့ အှနျလိုငျးအရောငျးဆိုငျတှကေနေ မှာယူနိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ အိမျအရောကျလာပို့ပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ရှကျစရာသိပျမလိုတော့ပါဘူး။
လကျလီစိတျပွီး နညျးနညျးခငျြးစီဝယျယူတာက အမြားကွီးတဈခါတညျးဝယျတာထကျ ဈေးပိုကွီးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လကျကားဈေးနှုနျးသငျ့တငျ့တဲ့ အရောငျးဆိုငျကို ရှာဖှဝေယျယူသငျ့ပါတယျ။
၄။ သကျတမျးကုနျဆုံးရကျကို အမွဲတမျးစဈဆေးပါ။
ကှနျဒုံးတှကေ အမွဲတမျးအသုံးခံတဲ့အရာတှေ မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ မဝယျခငျမှာ သကျတမျးကုနျဆုံးရကျကို အရငျစဈဆေးသငျ့ပါတယျ။
အမြိုးသားတိုငျးအတှကျ ရှေးခယျြစရာ ကှနျဒုံးအမြိုးအစားကတော့ Okamoto ကထုတျလုပျလိုကျတဲ့ ကှနျဒုံးအမြိုးအစားအမြားကွီးထဲမှာမှ ကမ်ဘာ့နံပါတျတဈအဆငျ့ကို ဆယျနှဈ ရထားတဲ့ Crown လို့ချေါတဲ့အမြိုးအစားကို ညှနျးပွခငျြပါတယျ. ဘေးကငျးလုံခွုံမှုအတှကျ စိတျပူစရာမလိုတဲ့အပွငျ ပါးလှာ တဲ့အတှကျ ကနြေပျမှု အပွညျ့အဝရစေ ရမယျလို့ Okamoto ကအာမခံထားပါတယျ။
ရှေးရခကျနရေငျတော့ Okamoto skinless Condoms ကိုသာရှေးခယျြကွညျ့ပါ. G&G mini mart တှမှောအလှယျတကူဝယျလို့ရနိုငျပါတယျ။
Previous: သူမ မနေ့ညက လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း လက္ခဏာ ၅ ရပ်
Next: သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ဖို့ လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် အဆင့်(၅)ခု